Antso fanohanana 0086-13586821262
Ny vokatra fisorohana ny aretim-po
Andiana fahatongavana vaovao
Mandany tanteraka ny heriko
pirinty natao tamin'ny ondana
Table Lamba Series
lamba firakotra Series
Ny orinasa dia naorina teo an 2006, dia miorina ao amin'ny Port Shinoa City ------ Ningbo. Avy ny fananganana efa nanolorana azy ho amin'ny fampandrosoana sy ny varotra ny lamba an-trano. Manana ny famokarana ny tsipika sy ny mpiasa ho an'ny voapaika manao sy fonosana.
Nandritra ny taona maro ny orinasa ny raharaha dia nampiseho tsara fampandrosoana fironana, ho tsara laza amin'ny mpanjifa, ny orinasa foana ny toe-tsaina "mpanjifa voalohany, fanompoana voalohany" tanjona, mifantoka eny an-tsena tinady, mijery lavitra mialoha ny ho avy, mamorona sanda ho an'ny mpanjifa sy ny tenantsika.
Ny orinasa tena vokatra dia ambainy, cushions, bodofotsy, fandriana entana sns. Ankehitriny dia manana raikipohy fahasalamana mba hamokarana vokatra Healthy. Ny vokatra no aondrana amin'ny firenena maro sy faritra, ary efa naorina fiaraha-miasa maharitra fifandraisana amin'ny mpanjifa maro. Ny orinasa foana hanome manaraka tsara tarehy kokoa mpanjifa amin'ny vokatra sy ny tolotra, tsara indrindra mba hahazoana tsara mpanjifa 'mahaliana sy tsara varotra ao amin'ny tsena.
Ny orinasa dia mino fa mitohy ny fanorenana ny ekipa, ny fanatsarana mitohy ny orinasa, ho fanohanana ny mpividy mba hanangana hoavy tsara kokoa!
Adiresy: # 27, Hengfeng Rd, Easten Developed Area, Fenghua, Ningbo
© Copyright - 2010-2020: Zo rehetra voatokana. - Hot Products - Sitemap - DIEM Mobile
Printing Mandany tanteraka ny heriko , Suede , Baby Swaddle Wrap , ondana , Cushion Car Car , Print lafika .